दु’खद खबर: सांसद तथा नेकपाकि वरिष्ठ नेता शान्ता चौधरिलाई फेरि च्याप्यो रोगले – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/दु’खद खबर: सांसद तथा नेकपाकि वरिष्ठ नेता शान्ता चौधरिलाई फेरि च्याप्यो रोगले
काठमाडौ । नेकपाका सांसद शान्ता चौधरी अस्वस्थ्य भएको जानकारी उनले सामाजिक सञ्जालवाट गराएकी छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेकपाका सचेतक पूर्वकमलरी समेत रहेकी चौधरीलामो समय देखि अस्वास्थ्य भएर घरमै बस्नुपर्दा आफुलाई निकै दुख भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी छन् । नेबुला लगाएको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले आफुलाई पुरानो रोग बल्झिएको बताएकी छन् । *** पूरा विवरण को लागि तल क्लिक गर्नुहोला ***
दमको रोगी शान्ताले त्यही रोगले फेरी सताउँदा आफु लामो समय देखि घर वाहिर निस्कन नपाएको भन्दै यस्तो रोग कसैलाई पनि नलागोस् भन्दै दुख ब्यक्त गरेकी छन् । कोरोनाको कहरकाबीच अस्पताल जाने वातावरण पनि नभएकाले घरमै नेवुलाको सहयोगमा बसिरहेको बताएकी छन् ।
उनी सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा लेख्छिन्, कोरोनाको कहर छ ‘मलाई यो शहरबाट बाहिर निस्केर गाउँमा जान रहर छ । साथीभाईसँग भेट्न सकिएको छैन , नियमित काम गर्न सकिएको छैन । कोठामा बसेर कहिले किताब त कहिले अनलाइनसँग समय बितेको छ । घरीघरी दमले सताउँछ, शारीरिक पि’डाले अत्याउँछ । दिनचर्या यस्तै छ !
आजभोलि मेरो यो स्वास्थयले निकै दुस्ख पो दिन थाल्योत सधै यो नेबुलाइजरको साहारामा बस्नु पर्ने यो पुरानो रोगले दिक्कै बनायो ! हस्पिटल जाउ नयाँ रोग कोरोना बोकेर पो आइएला भन्ने डर ! चलेकै छ यसैले दम जस्तो रोगत दुश्मन लाई पनि नहोस् निकै दुस्ख दिदो रहेछ ! *** पूरा विवरण को लागि तल क्लिक गर्नुहोला ***
भारतीय मिडियाले अति गरेपछि रविले दिए क डा चे ताबनी, भार तीय च्या नल ब न्द गरेकोमा खुशी (भिडियो सहित)
बर्दियामा मोटरसाईकल दुर्घटनामा परी श्रीमान श्रीमतिको निधन